बालरोग प्रतिष्ठानको अपुरो सपना – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर २९ गते १८:३३
जनसंख्याको ४० प्रतिशत बालबालिकासम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउँने कुरामा आमरुपमा चासो र चिन्ता कमै पाइन्छ । धेरै वर्ष बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरुले कान्ति अस्पताल बाल प्रतिष्ठानको स्वरुपमा विस्तार गर्न प्रयास गरे पनि आजसम्म यो विषयले सार्थकता नपाउँनु आफैमा विडम्बनापूर्ण विषय हो ।
दुई/अढाई दशकदेखि नै कुरा उठ्ने, प्रक्रिया सुरु हुने तर तुहिने नियति भोगी रहेको छ बाल प्रतिष्ठानले । त्यति बेलादेखि नै बाल प्रतिष्ठानबाट पनि ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ खोल्ने कुरा अगाडि बढेको थियो । यो विषय सरकारको रातो किताब ‘रेड बुक’मा पनि आइसकेको थियो । कान्ति बाल अस्पतालका यस अघिका थुपै निर्देशकहरुले यो कुराका लागि धेरै प्रयात्न गरे ।
विकसित मुलुकहरुमा बालबालिकाको प्रमुख अविभावक राज्य हो भन्ने सोचमा, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणजस्ता विषयलाई एकीकृत रुपमा लगिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी विषयहरुमा सघन रुपमा ध्यान जान अझै बाँकी छ । खासगरी स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा नवजात शिशु जीवन रक्षादेखि निःशुल्क खोप र पोषणका विषय सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन् । तर, यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको सन्दर्भमा बाल अस्पताल र बाल रोगसम्बन्धी विशिष्ठ सेवाको विस्तारसँग सम्बन्धित छ ।
यसका लागि बालरोगसँग सम्बन्धित उपचार गर्ने संस्था स्थापना र जनशक्ति बढाउँने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको महासुस हामी बालरोग विशेषज्ञहरुले गरेका छौ ।
दुई/अढाई दशकदेखि नै कुरा उठ्ने, प्रक्रिया सुरु हुने तर तुहिने नियति भोगी रहेको छ बाल प्रतिष्ठानले ।
त्यति बेलादेखि नै बाल प्रतिष्ठानबाट पनि ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ खोल्ने कुरा अगाडि बढेको थियो । यो विषय सरकारको रातो किताब ‘रेड बुक’मा पनि आइसकेको थियो । कान्ति बाल अस्पतालका यस अघिका थुपै निर्देशकहरुले यो कुराका लागि धेरै प्रयात्न गरे ।
त्यसका लागि बजेटसमेत छुट्टिसकेको अवस्था भए पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा त्यस्ता प्रतिष्ठान धेरै खुलेका कारण नेपाल सरकारलाई आर्थिक रुपमा धेरै भार पर्ने कारण देखाई आइसकेको बजेट बन्द भयो ।
इन्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थमा बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन हुने, अनुसन्धान हुने तथा यसको केन्द्र कान्ति बाल अस्पतालमा हुने र यसले आफ्ना विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालमा लाने भनिएको थियो । जति वेला यो अवधारणा नेपालमा आएको थियो, त्यतिवेला देशमा संघीयताबारे बहस नै भएको थिएन ।
अहिले पनि बाल प्रतिष्ठानको कुरा गर्दा खासगरी स्वास्थ्यको प्रशासन क्षेत्रले पदाधिकारी थपिने, त्यसले राज्यलाई भार थपिन्छ भन्ने रुपमा मात्रै यो विषयलाई बुझेको देखिन्छ । ४० प्रतिशत जनसंख्याका लागि ३ सय ५० हाराहारीमा मात्रै बालरोग विशेषज्ञ छन्, त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत छ । यस्तो अवस्थामा बाल मृत्यु घटाउन र स्वास्थ नागरिक बनाउँन पनि राज्यले बाल प्रतिष्ठानको विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्नेमा अहिले पनि यो विषय कसैको चासोमा परेको छैन् ।
हामीले कुरा गर्नेक्रममा ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’मात्रै नभई ‘इन्स्टिच्युट अफ म्याटनल एन्ड चाइल्ड हेल्थ’ भनेर अगाडि लैजाँदा राम्रो हुन्छ भनेर करिब ६ वर्षअघि परोपकार प्रसूति गृह र कान्ति बाल अस्पताल मिलेर कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरियो । तर, त्यो पनि मन्त्रालयमा त्यत्तिकै पेन्डिङ छ । र, हाल आ–आफ्नो क्षेत्र तथा प्रदेशमा तथा काठमाडौंबाहिर मात्र सरकारले यस्ता प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने नीतिअनुसार यो बन्द भएको अवस्था छ । हामीले यसबारे कुरा चलाउँदा मन्त्रालयले आगामी दिनमा यो सम्भव नहुने बताउने गरेको छ । उनीहरुको चाहना के छ भने, नेपालमा मातृ स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि संस्थाएक्लै छैन । तर, यो बनाएमा दुईवटै एउटा हुने थियो । तर, बाल तथा मातृरोगका विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र सेवा विस्तारको सोचअनुसार १५ वर्ष अगाडि भएको एमओयू पनि तुहियो ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा बालरोग विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार उक्त कुरा आवश्यक छ भनी अगाडि बढाउने भनिए पनि नेपालमा ठाउँठाउँमा प्रतिष्ठान बनिसकेको अवस्थामा एक मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने र त्यसअन्तर्गत एक जना डिन राखेर चलाउने भन्ने धारणा सुन्नमा आएको छ, तर कागजीरुपमा भने आइसकेको छैन ।
जनशक्ति, उपकरण तथा मर्मत–सम्भारमा अस्पतालले धेरै अभाव झेलिरहेको छ । कान्ति बाल अस्पतालका लागि नेपाल सरकारले गरेको कर्मचारीको व्यवस्थापन ज्यादै नै पुरानो हो । बिचबिचमा एकदमै नगण्य मात्रामा अस्पतालमा कर्मचारी थप गरिएको छ ।
इन्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थमा बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन हुने, अनुसन्धान हुने तथा यसको केन्द्र कान्ति बाल अस्पतालमा हुने र यसले आफ्ना विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पतालमा लाने भनिएको थियो ।
जति वेला यो अवधारणा नेपालमा आएको थियो, त्यतिवेला देशमा संघीयताबारे बहस नै भएको थिएन ।
त्यतिवेला यो अर्कै किसिमले आउने कुरा भए पनि अहिले संघीय संरचनाअनुसार शासन सञ्चालन भइसकेको हुनाले प्रत्येक प्रदेशमा चिकित्सा क्षेत्रमा एक प्रतिष्ठान बनाउने र त्यही प्रतिष्ठानअन्तर्गत नै बालस्वास्थ्यलाई राख्ने कुरा हाल सुनिँदै आएको छ । त्यसैले अब कान्ति बाल अस्पतालमा प्रतिष्ठान बन्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई कत्ति पनि विश्वास छैन ।
बालअस्पतालकिन छैन् प्राथमिकतामा?
अहिले कान्ति अस्पताल आफैमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेकै छ । त्यसमा पनि प्राथमिकताका आधारमा भन्ने हो भने अस्पताललाई नयाँ भवनभन्दा पनि पुरानै भवनको मर्मत–सम्भारमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यहाँ सम्पूर्ण शौचालय पानी चुहिने छन् ।
तिनीहरुको समेत मर्मत–सम्भारको आवश्यकता छ । भवन निर्माणभन्दा पनि अस्पताललाई अत्यावश्यक वस्तुमा जनशक्तिको अभाव छ ।
जनशक्ति, उपकरण तथा मर्मत–सम्भारमा अस्पतालले धेरै अभाव झेलिरहेको छ । कान्ति बाल अस्पतालका लागि नेपाल सरकारले गरेको कर्मचारीको व्यवस्थापन ज्यादै नै पुरानो हो । बिचबिचमा एकदमै नगण्य मात्रामा अस्पतालमा कर्मचारी थप गरिएको छ । नेपाल सरकारको बिरामी र स्वास्थ्य जनशक्ति अनुपातअनुसारको मापदण्ड कान्ति बाल अस्पतालमा लागू हुन सकेको छैन । जन शक्ति एकदमै न्यून छ ।
कान्तिमा नेपाल सरकारको ४४ वटा नर्सिङ दरबन्दी छ । सरकारले कान्तिलाई ५२ आइसियू बेड दिएकोमा जनशक्ति अभावमा अस्पतालले ३७ बेड भन्दाबढी चलाउन सकेको छैन ।
कान्ति अस्पतालमा आँखा तथा हड्डीरोग विशेषज्ञको दरबन्दी नै छैन । अस्पतालमा ३९ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहेकोमा एकजना मात्रै स्थायी मेडिकल अफिसर छन् । करारमा अन्य५ जनाछन् । यसका लागि मन्त्रालयतर्फबाट नै काम हुनु आवश्यक छ ।
बाल रोगका डाक्टरहरुलाई अन्य क्षेत्रमा त्यति अवसर नमिल्ने भएकोले पनि डाक्टरहरु त्यति कान्ति अस्पतालमा आउन चाहँदैनन् ।
कर्मचारीहरुका लागि आकर्षक तलब तथा अन्य सुविधा कान्ति बाल अस्पतालमा नभएका कारण पनि कान्ति अस्पताल रोजगारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन ।
उपत्यकाका अन्य सरकारी अस्पतालमा कान्ति बाल अस्पतालमा भन्दाआकर्षक सेवा सुविधा रहेको छ । जस्तै त्रिवि र कान्तिमा स्टाफ नर्सको तलबको कुरा गर्ने हो भने कान्तिमा नर्सको तलब २३ हजार छ भने त्रिविमा ४१ हजार रहेको छ ।
डा. राई कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जका निर्देशक हुन्